Iindaba -I-Beijing Bureau iHlola ukuSebenza kweMeyile yaMazwe ngaMazwe kunye nokuThintela uBhubhane noLawulo
Kutshanje, uSekela-Mlawuli we-Beijing Post Administration ukhokele iqela laya kwiZiko lokuPhathwa kweMiYale ukuze liphande ngokusebenza kwe-imeyile yokungenisa nokuthumela ngaphandle, kugxilwe ekuhlolweni kwe-disinfection kunye nobhubhane kuthintelo lwe-imeyile engenayo yamanye amazwe.
Ngexesha lophando, iBeijing Bureau yabuza ngokweenkcukacha malunga nokuhamba ngenqwelomoya okwenziwa kwilizwe liphela, yajonga ukuphathwa kokulayishwa kunye nokulayishwa, ukuhlelwa kunye nokusebenzisana namasiko ukukhangela imeyile engenayo. Ugxininiso lwaye lwenziwa ekuphumezeni ukubambelela kweziko le-airmail kumlinganiso weqondo lobushushu emzimbeni, kulawulo oluvaliweyo kwindawo, ukubulala iintsholongwane rhoqo kwindawo yemveliso kunye nendawo esembindini yeofisi, kunye nokuphunyezwa komsebenzi wokulwa ubhubhane njengesiqhagamshelo kunye nokuhamba rhoqo Ukubulala iintsholongwane kwimeyile engenayo.
I-Beijing Bureau igxininise ukuba imeko yokuthintela ubhubhane kunye nokulawula imeko imbi, kwaye amashishini eposi kufuneka alandele ngokungqongqo iimfuno ze-State Post Bureau's "Izindululo kwiMigangatho yokuSebenza kweMisebenzi yokuPhumela kwePost Express ngexesha loThintelo noLawulo lweSifo (uHlelo lwesiBini)" ukuya ukuphucula imigangatho yothintelo nolawulo kunye nokomeleza iingxaki ezingqongqo. Ukujongana ngokufanelekileyo nokususwa kwesiza kunye neposi yokuhambisa imeyile, kwaye uthintele ngokungqongqo ukusasazeka kwemeko yobhubhane ngejelo lokuhambisa. Kwangelo xesha, ngokweemfuno zikarhulumente kamasipala, kufuneka ikhawuleze iququzelele kwaye iphumeze ukubonwa kwabasebenzi nge-asidi, kunye nokunye
komeleze ulawulo lothintelo nolawulo lwabasebenzi.